धुम्रपान र पिटी-उद्योग समाचार-गोलङ रक्सी (समूह)
धुम्रपान र पिटी
के तिनीहरू स्कच व्हिस्कीको विशेषता हुन्? यी विशेष स्वादहरू कहाँबाट आउँछन्? के त्यो धुवाँयुक्त वा पिटको गन्ध छ? Wकुन व्हिस्कीमा छुट्टै धुवाँ छ? कुन ह्विस्कीमा सामान्य पीटी हुन्छ?
पिटी कहाँ बाट आयो
हामीले एकल माल्ट व्हिस्की उत्पादन गर्दा जौलाई पहिले अंकुराउन दिनुपर्छ, यसले जौको कोषको पर्खालमा रहेको स्टार्च छोड्छ। तर हामीले यसमा थप ध्यान दिनु आवश्यक छ, यसले जौको अंकुरण ओभरडन हुन दिन सक्दैन, अन्यथा, कीटाणुको वृद्धिको लागि अत्यधिक स्टार्च खपत हुन्छ, किण्वनको समयमा अल्कोहल उत्पादन धेरै कम हुनेछ।
Tउसको अर्को चरण जौ भुन्नु हो, र जौलाई अंकुरण हुनबाट रोक्नुहोस्। स्कटल्याण्डमा, पीट, जुन सजिलै उपलब्ध थियो, जौ बेकिंगको लागि उत्तम इन्धन थियो।
Pखाने, सामान्य माटो माटो र कोइला बीच उच्च पानी सामग्री, उच्च माटो सामग्री, अपूर्ण कार्बनीकरण, माटो बुझाउँछ। जब स्कट्सहरूले आफ्नो जौ पकाउन पीट प्रयोग गर्थे, जौबाट "फेनोलिक" यौगिकहरू माल्टमा ल्याइयो, जसले स्कच व्हिस्कीलाई यसको विशिष्ट स्वाद दिन्छ।
Tयहाँ पीट स्वाद उत्पादन गर्ने अर्को तरिका हो, त्यो ओक ब्यारेलको प्रभाव हो। ओक ब्यारेलहरू व्हिस्कीको स्वादको 60 देखि 70 प्रतिशतको लागि जिम्मेवार छन्, त्यसैले यदि ओक ब्यारेलहरूमा रक्सी पुरानो छ जुन पीट व्हिस्की समात्न प्रयोग गरिन्छ, यसले व्हिस्कीलाई पीट स्वाद पनि दिनेछ।
पीटी को वर्गीकरण
ए 1 ~ 5ppm कम पीटी सामग्री हो, र धेरै जसो स्कच ह्विस्की कम पीटी हुन्छ, बेहोस धुवाँको साथ, त्यसैले तपाईंले यसलाई याद नगर्दा पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्न।
B. 15 ~ 25ppm मध्यम पीटी सामग्री हो, जस्तै Talisker र Highland Park, स्पष्ट धुवाँयुक्त स्वादको साथ, र Islay's Caol lla र Bowmore पनि मध्यम तर बलियो "औषधि स्वाद" नभएको मध्यम पीटी सामग्री हो।
C. 30ppm भन्दा बढी पीटी सामग्री हो। Islay, Ardbeg, Laphroaig, Lagavulin बाट प्रख्यात ब्रान्डहरू विशिष्ट भारी पीट व्हिस्कीहरू हुन्, कडा पीट स्वादका साथ।
धुवाँ कहाँबाट आउँछ
त्यहाँ धुवाँ ल्याउने धेरै कारकहरू छन्। यदि ओक ब्यारेलको भित्री भाग रोस्ट गरिएको छ भने, धुवाँ व्हिस्कीमा हुनेछ, जसको परिणामस्वरूप जलेको टोस्टको धुवाँ हुन्छ।
डिस्टिलरको लागि जुन प्रत्यक्ष आगोले तताइएको छ, तापक्रम नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। डिस्टिलरमा रहेको ह्विस्कीको अंश अत्यधिक गर्मीको कारणले कोकिङ गर्ने हो, जसले गर्दा सल्फर र बारूदको स्वाद पनि एक किसिमको धुवाँ हो।
Bपीटसँग जौ खाँदा पनि धुवाँ उत्पन्न हुन्छ। माल्टमा फिनोल छोड्नुको अतिरिक्त, पीटले अपूर्ण दहनबाट धुवाँको गन्ध पनि समावेश गर्दछ। त्यसैले धुवाँ अक्सर पीटी संग सम्बन्धित छ।
अघिल्लो: किन धेरै जसो स्कच व्हिस्की लेबलहरू "हिरन" संग छन्?
अर्को: अमेरिकी व्हिस्की